Global Voices teny Malagasy » ﻿Côte d’Ivoire : Azo Hamarinina Ve Ny Fahatsiarovan’ireo Mpomba An’i Gbagbo Ny Fahiny? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Septambra 2016 12:19 GMT 1	 · Mpanoratra Laurent Diawara Nandika miora
Sokajy: Afrika Mainty, Cote d'Ivoire, Fampandrosoana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna
Ny filoha teo aloha Laurent Gbagbo, toa amin'ny wikipédia – sehatra ho an'ny daholobe
Nizotra tsy nisy fifandonana ny fifidianana ho filoha ivoariana tamin'ny 25 Oktobra 2015. Tamin'izany no nahitàna ny filoha amperinasa, Alassane Ouattara, tafaverina hitondra ny firenena, tamin'ny fihodinana voalohany. Kanefa, taona enina taorian'ny nahalàny voalohany azy ho filoham-panjakàna tamin'ny 2010, ary na tsara aza ny tombana ara-toekarena, mbola mihelohelo mandrakariva ao amin'ny firenena ny alok'i Laurent Gbagbo, ilay filoha nodimbiasany, izay vao avy naverina nosokafana ny raharaha momba azy any amin'ny Fitsarana Iraisampirenena (CPI).
Gbagbo migadra, saingy Gbagbo tsy rava
Namela takaitra marobe ny olana politika nanozongozona an'i Côte d’Ivoire tamin'ny Desambra 2010 sy 2011, ratra tsy mbola mety mikombona enina taona aty aoriana. Ho fampahatsiahivana, nandà ny tsy hiala amin'ny toerany ny filoha am-perinasa, Laurent Gbagbo, ny ampitson'ny namoahana ireo voka-pifidianana – nilazan'ny Kaomisiona Mahaleotena misahana ny Fifidianana, fa ny mpifaninana taminy, Alassane Ouattara, no nandresy tamin'ny salanisa 54,1% tamin'ny vato manankery, fanambaràna izay vetivety foana dia nohamafisin'ny fianakaviambe iraisampirenena. Mpitarika ampahany tamin'ny tafika mitam-piadiana, voaendaky ny hery iraisampirenena, izay Frantsay no ankamaroany, ihany i Gbagbo nony farany. Tsy nilaozan'izay fanontaniana hipetraka izany, momba ny ‘fanapahan'ny frantsay’ ny ao Côte d’Ivoire – nanohana mibaribary an'i Ouattara i Frantsa talohan'ny fifidianana, raha teny ampita kosa i Laurent Gbagbo izay nilomano hatrany tao anatin'ny faniriany « hanafaka ny fireneny amin'ny vahohon'ny frantsay».
Na izany aza, teo ambanin'ny rivotry ny fanoherana ny mpanjanaka, nandritra ny fitondrana Gbagbo (2000 – 2011), vetivety dia nivadika ho fanomezana tombon-dahiny foko iray sy fampiroboroboana faritra ilay politika fanafahana napetraka ho arahana. Araka izany, ny Human Rights Watch dia nanameloka fanararaotam-pahefana  tamin'ny fampiasàna ny fotokevitra ara-poko sy ny maha-olompirenena mba hanaovana tsinontsinona ny ampahany betsaka amin'ny vahoaka. Teraka ilay « article 125  » tsy ofisialy sady malaza ratsy, napetrak'ilay mpitarika ireo tanora mpomba an'i Gbagbo, Charles Blé Goudé. Ny tena votoatiny dia ny hitarihana ireo « tanora tia tanindrazana » hanenjika ireo izay ahiana ho mpanohitra, amin'ny fidarohana sy fandoroana velona azy ireny. Tsy ampy hamiliana ireo rehetra mpomba an'i Gbagbo hanome lamosina ny mpitarika azy ireo io trosanà herisetra io, ireo mpomba izay manohy hatrany ny filazàna hoe tsy rariny ny fisamborana azy sy ny famindràna azy hanatrika ny CPI any La Haye (miaraka amin'i Blé Goudé), ary tetika tsikombakomba novolavolain'i Frantsa mba hanilihana azy amin'ny tontolo politika ivoariana, hanomezana tombony an'i Alassane Ouattara izao.
Fotoana iray fanararaotra ho an'ireo mpomba azy mba hanakianana ny fihetsik'i Ouattara ny fitsaràna an'i Laurent Gbagbo amin'ny resaka heloka bevava natao tamin'ny zanak'olombelona. Manome sehatra iray ho an'ireo mpanohitra ny filoha ankehitriny, izay maka fandresendahatra iray ho atao araka ny sitrapony : i Frantsa no nametraka an'i Ouattara ho mpitondra ny firenena (izay i Nicolas Sarkozy no filohany), maniry fatratra ny hitazona ny tombontsoany ao amin'ilay zanataniny fahiny. Petrakevitra iray izay toa maharesy lahatra ireo ivoariana maro, saingy mazandoha raha ny zavamisy sady mandiso be an'izay. Voalohany amin'izy rehetra :ny fihisàrana, tamin'ny 2015, teo amin'ireo fifanakalozana nisy tamin'ny Frantsa sy Côte d’Ivoire (mpifandray ara-barotra voalohany sy ara-tantara amin'ilay firenena), ka nampahazo aina an'i Maraoka. Tamin'ny taona lasa, 22% no fampiasambola mivantana nataon'i Maraoka tao amin'ny firenena, nanoloana ireo orinasa frantsay, tsy nanana afa-tsy 16 %. Ho tahàka izany ve no nisy raha toa i Ouattara ka saribakoly napetrak'i Parisy ? Mampisalasala. Tsy rava na izany aza ireo mpomba an'i Gbagbo, ary manenjika amin'ny ankapobeny izay rehetra vitan'i Ouattara. Eo ihany koa, mandiso azy ireo ny zavamisy.
Firoboroboana ivoariana mijoro tsara
Ho fampahatsiahivana, teo ambany fitantanan'i Laurent Gbagbo, niaina fotoan-tsarotra i Côte d’Ivoire tamin'ny lafiny fampandrosoana. Toekarena mitàna ny laharana fahaefatra taty Afrika atsimon'i Sahara tamin'ny 1995, nitrotrongy izy tany amin'ny taona 2000. 2% monja no salanisan'ny fitomboan'ny harinkarena faobeny, raha 5% eo izany ho an'ireo ao Afrika atsimon'i Sahara. Fanampin'izany, teo anelanelan'ny 1995 sy 2008, nitombo be ny hamafisana sy halalin'ny fahantràna, niala avy any amin'ny 10 ary lasa 19% ny tahan'ny fahantràna. Zara raha nasiana fanavaozana ireo fotodrafitrasa efa tranainy be. Mirodana tsikelikely ireo tranobem-panjakana, lasa mampidi-doza ny làlana, lasa matetika ny fahatapahan'ny herinaratra. Fanampin'izany, ny fitomboana mampanahy misy amin'ny kolikoly – indrindra fa any amin'ny sehatry ny angovo fandrehitra – izay nahatratra haavo ambony be tokoa. CFA lavitrisa maro no voahodinkodina tao amin'ny kitapombolam-panjakana.
Tena narefo araka izany ny firenena rehefa nivoaka tamin'ilay krizy politika tamin'ny 2011. Kanefa, nanomboka tamin'ity taona ity, nihena ny fiantraikan'ny fahantràna. Fitohizan'ny zavabita teo aloha fotsiny sisa ny ambiny amin'ilay dimy taona voalohany, fepotoana fiasana ho an'i Ouattara : teo anelanelan'ny 2012 sy 2016, nahavita dingana i Côte d’Ivoire, nitsambikana toerana 25 tao anatin'ny fandaharan'ny “Doing Business” an'ny Banky Iraisampirenena, lasa eo alohan'i Nizerià, laharana voalohany amin'ny toekarena Afrikàna. Teo anelanelan'ny 2013 sy 2014, lasa 60.000 farantsa CFA ilay karama farany ambany 36 000, niverina nisondrotra indray ny Tondron'ny Fivoaran'ny Isambatan'olona (IDH), napetraka ny fiahiana ara-pahasalamana ho an'ny rehetra, lasa 6 % amin'ny PIB ilay fampiasambolan'ny fanjakàna 2,5 % ho an'ireo fotodrafitrasa.
Nandritra io vanimpotoana io ihany, nipoapoaka ny fampiasambola ary niha-nahazo hery ny ara-bola – indrindra fa tamin'ireo fandaharanasa notarihan'ny Tahirimbola Iraisampirenena (FMI), teo ambanin'ny aloky ny fampidirana hetra sy ny fifehezana ny fandaniana. Tany amin'ny sehatry ny fambolena, niakatra ny vokatra tany amin'ireo seha-pamokarana goavana toy ny cacao (36 %), ny kafe (16 %), ny voanjo (18 %) ary ny fary (12 %). Tombony ho an'ilay sehatra ny nametrahan'ny fanjakàna ny fiantohana ny vidin'entana avy eny amin'ny mpamokatra, ary ny fametrahana ireo fandaharanasa iarahan'ny fanjakana sy ny tsy miankina mba hampientana indray ny famokarana. Tafakatra 10,5% ny tondro faobe ho an'ny famokarana indostrialy, 10% ny sehatry ny asatànana ary 23% ny fanorenana. Ny sehatry ny tolotra, tafakatra 7% ny tondron'ny volamaty, nitombo 14% ny isan'ireo mpanjifa fifandraisandavitra. Izany rehetra izany no nisy dia noho ny fanavaozana ny fomba fitondra ireo orinasa, ny fandaharanasa fampiasambolam-panjakana ary ny fisondrotan'ny vola miditra isan-tokantrano.
Ireny zavabita ireny, tsy hoe fotsiny nahafahan'ny firenena niverina tamin'ny làlan'ny fitomboana ihany, fa koa hamirapiratra toy izay tsy mbola hitany teo amin'ny tantarany. Na izany aza, mbola misy ny ezaka atao mba hanatratrarana ny fipongarana amin'ny 2020, araka ny fanirian'ny governemanta. Ny tena fanamby dia ny hamitàna ny fisondrotana ao anatin'ny fepotoana ary hanamafisana ny fiantraikany any amin'ny faritra ambanivohitra. Eo no maha-zavadehibe ny fampitomboana ny herin'ireo vondrom-piarahamonina ifotony. Ho tena zava-dehibe ihany koa ny mampiasa vola betsaka any amin'ny fanabeazana sy fanofanana. Toa tsapan'ny governemanta izany, raha ny tetibola vaovao navoakany no jerena : efa hanakaiky ny 22% amin'ny fandaniana ao anatin'ny tetibolam-panjakana (+18 % anaty taona iray) ny fandaniana ho an'ny fampianarana sy ny manodidina azy amin'ity taona ity.
Nahavita nandrakitra firoboroboana ambony tokoa teo anelanelan'ny 2012-2015 (9,3 %), ilain'i Côte d’Ivoire ny manohy an'izay diany izay, farafahakeliny hatramin'ny 2017, miaraka aminà fisondrotana 7 % isantaona , hoy ny fanontàna avy amin'ny Africa’s Pulse an'ny Banky Iraisampirenena. Ao Afrika, i Etiopia, Tanzania ary Mozambika sy Roandà irery ihany no afaka miteny betsaka momba izany. Mazava ho azy, resaka tarehimarika fotsiny io, ary anjaran'i Côte d’Ivoire izany ny manao izay hahatonga ny firoboroboany ho fifanotronan'ny rehetra bebe kokoa, mba hahita tombony amin'izany ireo vahoaka ivoariana, kanefa mampanahy ihany ny Tondron'ny Fivoaran'ny Isambatan'olona (IDH) ao amin'ny firenena. Na izany aza, soa fa mijanona ho tarehimarika fotsiny ihany ireny, vavolombelon'ny tena fiovàna tampoky ny toekarena sy ny fiarahamonina, raha ilay Côte d’Ivoire an'i Gbagbo kosa nilentika tamin'ny fomba mampidi-doza nankany amin'ny faharavàna. Izy ireny dia ampy hiampanga ilay endrika fifikirana fotsiny amin'ny antoko, fa tsy fitiavana tanindrazana, nasehon'ireo izay milaza fa i Ouattara dia tsy hafa fa saribakoly manatanteraka ny baikon'i Frantsa fotsiny, ary Gbagbo no tena mpanavotra ny firenena.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/09/23/89003/
 nanameloka fanararaotam-pahefana: https://www.hrw.org/news/2016/01/25/laurent-gbagbo-and-charles-ble-goude-trial
 fisondrotana 7 % isantaona: http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-159328-la-cote-divoire-championne-de-la-croissance-africaine-2018315.php